My Astro View: နေမင်းရဲ့ သမီးတော်သို့
ဒီစာစုလေးနဲ့အတူ ကဗျာဆရာမိုဃ်းဇော်ရဲ့ နေကြာပန်းကဗျာလေးကို မျှဝေခံစားလိုက်ချင်ပါတယ်။
နေမင်းရဲ့သမီးတော်လို့ ကျနော်တခါက တင်စားခေါ်ဝေါ်ရေးသားခဲ့ဖူးတဲ့ သူမအတွက် အနာဂတ်အလားအလာ ဟောပြောချက်ကို အနောက်တိုင်း နက္ခတ်ဗေဒင်ဆိုဒ်တစ်ခုကနေ ကူးယူဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ သင်ဟာ နေမင်းရဲ့ သမီးတော်အကြောင်း စိတ်ပါဝင်စားမှုရှိခဲ့ရင် ဒီအင်္ဂလိပ်စာပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးကို ဖတ်သွားနိုင်မယ် လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ဘာသာပြန်ပေးရတာထက် မူရင်းကို ဖတ်ကြည့်စေချင်လို့ပါ။ နေမင်းရဲ့သမီးတော် ဘုန်းကြီးလို့အသက်ရှည်၊ အသက်ရှည်လို့ ကျန်းမာ၊ ကျန်းမာသထက် လန်းဖြာ အောင်မြင်ပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလျက်..။
Aung San Suu Kyi (The Lady of Myanmar) is in the news on CNN after the arrest of an American tourist who swam to her house, where she lives isolated in house arrest (already 13 of the last 18 years). See CNN…
Also in April 2010 Uranus will be opposition her natal Sun. That means that in April 2010 the issue of restricted liberty might be ‘hot’. Also ther is the square of Jupiter in May 2010. AS Jupiter is the final transitting planet ver her Sun, that might mean that her conditions and situation might improve after April 2010. Let us hope that the Myanmar government will allow medication andadocter before that.
နေကြာပန်း အနီရောင် ရေသောက်မြစ်တွေဆီက သူလာခဲ့တယ်။ ပွင့်ပြီးရင် ကြွေရမှာလည်း သူသိတယ်။ ကြွေပြီးရင် နွမ်းရမှာလည်း သူသိပါရဲ့။ မလိုပါဘူး။ သင်တို့ဆီက ဘာအကူအညီမှ မလိုပါဘူး။ နေမင်းကို အံကြိတ်ရင်းသူကြည့် သတ္တိရှိတဲ့ မွှေးရနံ့တွေနဲ့….။
နေမင်းရဲ့သမီးတော် ကျန်းမာစေဖို့ အလေးအနက် မေတ္တာပို့ပါတယ်
ကျေးဇူးပါကိုရမ်းဂမ်ရေ...ဆရာဒလမင်းခေါင်ရဲ့ မဟာဘုတ်ဗေဒင်ပညာ ဆိုတဲ့စာအုပ်ထွက်တယ်..ကောင်းတယ်ဗျ။ ငြိမ်းချမ်းပါစေ။
ကဗျာတော့ ခိုက်သွားပြီဗျာ.. ဟုတ်ပါ့ ဘယ်လာလာ မမှုတဲ့အမေစု
ပါ။ အမှုဖြစ်တာတောင် မျက်နှာက အေးချမ်းပြီး ဘာမထီ ပုံမျိုးပါပဲ